Mifehy amin'ny 'Touch Pad' ho an'ny taranaka vaovao Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Mifehy amin'ny 'Touch Pad' ho an'ny Apple TV vaovao
El New York Times nitatitra, fa ny taranaka Apple TV manaraka, dia miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra nohavaozina, izay dia hisy 'Touch Pad'.
Nilaza ny tatitra fa ny fanaraha-maso lavitra an'ny Apple TV vaovao, miaraka amin'ny 'Touch Pad', dia hisy somary matevina kokoa noho ny kinova ankehitriny. Ary koa, nilaza ny New York Times fa mety hanana vitsivitsy ny remote vaovao 0,6mm matevina. Ny tatitra dia manamarika fa ny tontonana mikasika azo ampiasaina amin'ny fikororohana, ary koa dia hampiditra bokotra roa, izay heverinay fa ho azy 'sakafo' ary ny 'Play'.
Izay rehetra nanana Apple TV, anisan'izany ny tenako, dia mahalala fa manahirana ny fitetezana ny Apple TV, raha tsy ataonao amin'ny iPad na iPhone izany, ary manapa-kevitra ny hanao azy amin'ny lavitra ny Apple TV, izany dia helo. Ny efijery milaza fa ny remote vaovao dia hahafahanao mifehy ny Apple TV amin'ny fampiasana fihetsika tsotra, toy ny fampiharana 'Remote', azo alaina amin'ny iPhone, iPad, iPod touch, ary tato ho ato Apple Watch.
Ny famolavolana fanaraha-maso lavitra vaovao no ho fanovana lehibe voalohany amin'ny Apple TV hatramin'ny nanombohana azy tamin'ny 2007. Apple TV dia boaty napetraka ambony izay mifamatotra amin'ny fahitalavitra iray, ahafahan'ny olona mifanerasera aminy, amin'ny alàlan'ny Internet. Ny kinova voalohany an'ny mpanara-maso Apple TV, izany tokoa plastika fotsy misy bokotra roa. Ny manaraka Malagasy Bible, Avy tany metaly amin'ny fiovana kely mankany amin'ny bokotra.
Milaza ihany koa ny tatitra fa Apple hampahafantatra ny taranaka Apple TV manaraka, amin'ny volana manaraka, ao amin'ny WWDC 2015.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Mifehy amin'ny 'Touch Pad' ho an'ny Apple TV vaovao
Te-shirt Apple ve ianao?
Fanavaozana ny fampifanarahana RAW vaovao ho an'ny Digital Cameras 6.04